အင်တာနက်ရှိရုံဖြင့် Viber မှ နိုင်ငံတကာသို့ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ဖုန်းခေါ်ဆိုလိုပါသလား .....
Home » Services » Other Services » အင်တာနက်ရှိရုံဖြင့် Viber မှ နိုင်ငံတကာသို့ဈေးနှုန်းသက်သာပြီး လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ဖုန်းခေါ်ဆိုလိုပါသလား …..
Contact Number: 09 5058441
Listed: September 17, 2014 6:31 am
China .. Mobile/Landline … ၁၃ ကျပ်ခန့် / မိနစ်
Singapore … Mobile/Landline … ၂၀ ကျပ်ခန့် / မိနစ်
Malaysia …. Mobile ၄၀ ကျပ်ခန့် / မိနစ်… Landline ၂၁ ကျပ်ခန့် / မိနစ်
Thailand … Mobile/Landline … ၂၉ ကျပ်ခန့် / မိနစ်
India … Mobile/Landline … ၂၂ ကျပ်ခန့် / မိနစ်
USA …. Mobile/Landline … ၁၉ ကျပ်ခန့် / မိနစ်
ခန့်သာ ကျသင့်ပြီး အခြားသော နိုင်ငံ ပေါင်းများစွားကို လည်း ဈေးနှုန်းသက်သာ စွာ ခေါ်ယူနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံများ၏ တရားဝင်ဈေးနှုန်းများကို https://account.viber.com/rates/ တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ှရှု နိုင်ပါတယ် ။
Viber Call out အတွက် အကောင့် ဖွင့်လိုပါက … https://account.viber.com/ တွင် သွားရောက်ဖွင့်လစ်နိုင်ပါသည်။
Viber Call out ၀ယ်ယူလိုပါက
$4.99 == ၅၅၀၀ ကျပ်
$9.99 == ၁၁၀၀၀ ကျပ် ဖြင့်
Trinity မှ ၀ယ်ယူ ရရှိနိုင်ပါပြီ ………
အသေးစိတ်သိလိုပါက … FB message (သို့) .. 09 5058441 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Facebook မှ ကြော်ငြာ ထည့်ခြင်း ( Facebook ads )
Ad Reference ID: 375541879c61980c